Zimbabwe | Somali Press -- Page no - 21
African leaders call for fair Zimbabwe poll
Zimbabwe: Forty of Africa's most prominent figures have published an open letter calling for Zimbabwe's presidential run-off to be peaceful and fair. On Friday, Mr Mugabe warned that veterans from Zimbabwe's 1970s war of independence were ready to fight to stop the MDC gaining power. The Herald newspaper quoted Mr Mugabe as saying:...
Zimbabwe ruling party plan's to deploy war veterans in campaign
Harare: Zimbabwean President Robert Mugabe's party said on Wednesday it would deploy more war veterans to campaign in some opposition areas ahead of a presidential election run-off marred by violence. Opposition Movement for Democratic Change leader (MDC) Morgan Tsvangirai accuses ZANU-PF of widespread attacks on his supporters ahead of the...
Zimbabwe opposition leader rejects consensus
Harare: Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai on Tuesday ruled out suggestions of a national unity government, saying his party was sure to win a presidential runoff despite government violence. Tsvangirai told a news conference in Harare that Zimbabwe was being run by a military junta and 66 supporters of his Movement for Democratic...
Zimbabwe court orders release of opposition leader
Harare: Zimbabwe's High Court on Sunday ordered police to release an opposition Movement for Democratic Change (MDC) member of parliament, who was arrested on Saturday for the second time in a week. Eric Matinenga was initially arrested on June 1 on charges of inciting public violence in his constituency, but was released on Thursday after a...
Briton, Australia criticize Mugabe's presence at Rome summit
Rome: The Zimbabwean president Robert Mugabe's joining a United Nations food crisis summit has raised criticism from Britain and Australia. Britain criticised the presence of Zimbabwean President Robert Mugabe at this week's global food summit in Rome, as obscene. "We think it's particularly unfortunate that he has decided to attend...
Zimbabwe army chief declares troops 'must back Mugabe or quit'
Zimbabwe: Gen Chedondo said troops were being deployed to help control violence Zimbabwe's army chief has told soldiers they must leave the military if they do not vote for incumbent President Robert Mugabe in next month's run-off poll. Chief-of-staff Maj Gen Martin Chedondo said soldiers had signed up to protect Mr Mugabe's principles of...